Al-shabaab oo cunaqabateyn ku soo rogtay gobolada dhexe |
Al-shabaab oo cunaqabateyn ku soo rogtay gobolada dhexe
Waxaa laga soo deyrinaya xaaladda ka jirta deegaanno badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, kaddib markii deegaannada loo diiday inay galaan gawaarida sida raashinka iyo adegyada kale ee qutul daruuriga ah.
Kooxda Al-shabaab oo horay inta badan gobolka maamuli jirtay, ayaa waxaa kala wareegay ciidamada dowladda oo gacan ka helaya kuwa Midowga Afrika ee AMISOM,waxaa Al-shabaab ay xayiraad ganacsi ku soo rogtay deegaanno ka tirsan gobolka.
Dadka deegaannadan ayaa walaac ka muujiyay tallaabada kooxda Al-Shabaab ay xayiraadda ganacsiga ugu soo rogtay deegaannadooda, tallaabadaas oo sababi karta xaalad bini’aadannimo oo halis ah.
“Muddo ku dhow toddobad wax gawaari ah ma soo galin gudaha inta badan magaaloyinka gobolka ay ka joogan ciidanka dowladda,baaburti ka imana jirtay Boosaaso iyo Muqdisho,waxaa amar lugu siiyey gobolka inta ay ciidanka ka joogan inaysan galin,arrinta Al-shabaab baa ka danbeeya xaaladda dadkuna way liidata oo raashin badan oo keyd ah ma jiro” ayuu yiri Xassan Cali oo ka mi ah dadka ku nool Ceelbuur.
Ninka Al-shabaab ugu magaacab gobolka Galgaduud oo la yiraahdo Xasan Yacquub Cali waxaa uu ku amray gaadiidka raashinka ka keena magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso inaanay tegi karin deegaannada Ceelbuur, Ceelgaras, Ceel la-helay iyo Ceel-qooxle oo dhammaantood ka tirsan gobolka Galgaduud.
Tan iyo markii howlgalladi bilowdey bilowgi bishii hore waxaa deegaanno badan oo gobollada dalka ah laga saaray Al-shabaab, waxaana ay taasi dhalisay inay Al-shabaab amaro ku bixiyan go’doominta deegaannada laga qabsadey.
Dowladda Soomaaliya dhankeeda waxaa ay sheegtay in gar gaar gaarsin doonto dhammaanba deegaannada ay ku suganyihiin ciidamada dowladda iyo sidoo kale deegaannada kale ee ay u barakacen dadka ka cararayan in dushooda dagaallo ka dacaan.